သံသရာအဆက်ဆက် ဝဋ်ကြွေးကုန်လို့ ပြန်ဆုံတဲ့အခါ အမေဝမ်းထဲက အမေ့ရဲ့ သားလေးတစ်ယောက်အဖြစ်သားပြန်လာပါရစေ
February 8, 2020 Alinn Pya 0
ကျေနပ်တယ် အမေ သား….ကျေနပ်တယ် လောကအလယ်မှာ အမေရဲ့သားလေးအဖြစ်ဖြစ်ခွင့်ရခဲ့လို့ ….. လောကကြီးက မျက်နှာသာမပေးတော့ အမေဆိုသော …. အမေတစ်ယောက်နဲ့ အတူရှင်သန်ခွင့်မရတာကိုတော့သားဝမ်းနည်းမိတယ် ….. မငိုပါနဲ့ အမေ သားလာလမ်းကို အမေမှန်းဆပြီးလွမ်းနေပါ နောက်နှောင် ဘဝအဆက်ဆက် …… သံသရာအဆက်ဆက် ဝဋ်ကြွေးကုန်လို့ ပြန်ဆုံတဲ့အခါ အမေဝမ်းထဲက အမေ့ရဲ့ သားလေးတစ်ယောက်အဖြစ်သားပြန်လာပါရစေ … အခု့တော့ ……အခု့တော့ အမေ သားကိုသွားခွင့်ပြုပါဦး…. အမေ သက်ကျော်ရာကျော်ရှည်ပါစေ ….။မြောက်ဦးသားရွှေညာမြေ ကိသာဂေါတမီ […]
ဖော်ပြပါ ပုံပိုင်ရှင် အမျိုးသမီးအား တွေ့ရှိပါက ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပေးကြပါရန် ခင်ပွန်းဖြစ်သူမှ တောင်းဆို
ဖေဖော်ဝါရီ(၈) AlinnMyay(အလင်းမြေ) ပြင်ဦးလွင်မြို့ ရွှေဘုံသာလမ်း၊ ရပ်ကွက်ကြီး(၂)၊ အမှတ်(၃၈၊ ၃၉) (၂၉) သုမင်္ဂလာ တွင် နေထိုင်သူ ဦးနေလင်း၏ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်မျိုးသီရိမောင်(ခ) ဒေါ်တင်တင်ဝင်း(ခ) မကြူကြူ မှတ်ပုံတင် ၉/မမန(နိုင်)၀၀၂၂၅၈ ကိုင်ဆောင်သူသည် (၂၉-၁၁-၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် နေအိမ်မှ ထွက်သွားပြီး ယနေ့အချိန်ထိ ဆက်သွယ်၍မရပါသဖြင့် တွေ့ရှိပါက အကြောင်းကြားပေးပါရန် နှင့် လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာတွင် ကူညီ ဖြန့်ဝေတင်ပြပေးပါရန် AlinnMyay(အလင်းမြေ)မီဒီယာသို့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဦးနေလင်းမှ အကူအညီတောင်းခံလာခဲ့ပါသည်။ […]
တနေ့တည်းတွင် အနုကြမ်းစီးမှု ဘဏ်ဓားမြ မှု နူစ်မူ ဆက်တိုတ်ဖြစ်ပွား
မြိတ်မြို့၊ ကန်ဖျားရပ်တွင် အနုကြမ်းစီးမှုဖြစ်ပွား 7.2.2020 မြိတ်မြို့ ၊ ကန်ဖျားကုန်စိမ်းစျေးဟောင်းအနီး ဒေါ်တင်ကြူ နေအိမ်တွင် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၇ ရက်၊ ည ၈ နာရီခန့်က အနုကြမ်းစီးမှုဖြစ်ပွားကြောင်းသိရပါတယ်။ ကန်ဖျားရပ်ကြီး၊ ဗိုလ်ဗထူးလမ်းသွယ်(၂) အိမ်အမှတ်(၁) ဒေါ်တင်ကြူနေအိမ်တွင်၎င်း၏ သမီးဖြစ်သူ အေးမိုးသူ နှင့်တူ ၃ နှစ်အရွယ်၊ နှင့် ၈ လ အရွယ် နေအိမ်တွင်ရှိနေစဉ် အမည်မသိ အမျိုးသား ၃ ဦးက ခြံတံခါးကျော်ဝင်ပြီး […]
ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီး ရောင်ခြည်တော် ကွန့်မြူးပါတယ်
မနေ့ညက ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီး ရောင်ချည်တော် ကွန့်မြူးပါတယ်၊2020မှာမြန်မာပြည်ကြီးအတွက် အေးချမ်းတဲ့ အောင်အတိတ် အောင်နမိတ်ပါ ဘုရားလေးဆူတို့၏ မွေတော် ဓာတ်တော်များ ဌာပနာရာ စေတီတော်မြတ်ကြီး ဖြစ်သောကြောင့် လေးဆူ ဓာတ်ပုံ ရွှေတိဂုံ စေတီတော်မြတ်ကြီးဟူ၍ ခေါ်ဝေါ်ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အမြင့်ဆုံး ဘုရားစေတီမှာ ၃၂၆-ပေ ရှိသော ရွှေတိဂုံ စေတီတော်ပင်ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ရှိ သိင်္ဂုတ္တရ ကုန်းတော်ပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။ လေးဆူဓာတ်ပုံ ရွှေတိဂုံ ဟုလည်း ခေါ်တွင်သည်။ စေတီအစ ရွှေတိဂုံက […]
အိပ်မက် မက်တတ်ရင် သိမ်းထားပါ….(က) မှ (မ) အထိ
[ က ] နှင့်ပက်သက်သော အိပ်မက်များ ၁။ ကြာမျိုးငါးပါးအနံ့ကို ရှုရသည်ဟု မြင်မက်မူ တည်ကြည့်စွာ ဂုဏ်သတင်းကျော်စောရအံ့ ၂။ ကြာညိုပန်းကို ပန်ရသည်ဟု မြင်မက်မူု မယားကောင်းရအံ့ ၃။ ကြာသွတ်အိုးနှင့် ရေချိုးရသည်ဟု မြင်မက်မူ သူတစ်ပါးတို့၏မှီခိုရာ ဖြစ်အံ့။ ကြာသွတ်အိုးမြင်မက်မူ စည်းစိမ်များအံ့ ၄။ ကြာပန်းစသည်မြင်မက်မူ ဖျားနာအံ့ ၅။ ကျွဲစီးရသည်ဟု မြင်မက်မူ ကျေးကျွန်ရအံ့ ၆။ ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက်၊ […]